Turkiga oo ku biiray dalalka sameeya daawada Karoonaha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkiga oo ku biiray dalalka sameeya daawada Karoonaha
Turkiga ayaa ka mid noqday dalalka tursan ee Iiraan ku jirto ee iyagu sameeya daawada Karoonaha ee yaraysa in qofku u galo isbitaal. Waxa hadda sameeya oo keliya dhowr dal inkastoo mid ka mida daawooyinka uu qayb weyn ku leeyahay lamaane Turki ah.
Daawadan Turkiga ayaa ahayd inay diyaar noqoto bartamihii sanadkan laakiin suurogal ma noqon, waxase hadda muuqata in Turkigu helay aqoonta uu ku samayn karo daawooyin kale.
”Waxa daawada aan ku talaali doonaa dadka aakhirka bishan ayuu yiri wasiirka caafimaadka oo amaanay madaxweyne Erduqaan. Waxaan ku biirnay dalal hadda awood u leh inay sameeyaan daawada ayuu raaciyay.
Iiraan ayaa iyadu marhore dadkeeda siisay daawo ay iyadu samaysay. Madaxweyne Erduqaan oo isna ka hadlay daawada ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka dalku gaaray, wuxuuna balan qaaday inuu la wadaago dadweynaha caalamka.